> Resource > Windows > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows Vista
Waxaan ka Windows Vista soo kaban karto, tirtiray Files?
Hey Waxaan halkan dhibaato helay. My kid yar tirtiray waraaqaha shaqada ka computer ka dibna waxaan ka bariyeelay Recycle Bin dareen la'aan wixii uu sameeyey. Qof ii sheegi kartaa sida inuu ka soo kabsado files tirtiray ka computer Windows Vista? Waan idin jecelahay aad u badan haddii aad i siin kara qaar ka mid ah talooyin waxtar leh. Best xiriira.
Waxaad had iyo jeer soo celin karo files tirtiray ka Recycle Bin on your computer Windows Vista, haddii aadan waxa loo madhiyo. Oo xataa haddii Recycle Bin ayaa la waayay, aad wali jeclahay inuu ka soo kabsado files tirtiray ka computer Windows Vista oo isticmaalaya software cid saddexaad soo kabashada xogta.
The files tirtiray waa la waayay doonaa si joogto ah oo keliya marka ay overwritten by xog cusub on your computer. Taas macnaheedu waxa weeye in alla inta tallaabo waa deg deg ah oo ku filan, faylasha tirtiray la soo kabsaday karaa Vista Windows ah tirtiray barnaamijka file sida Wondershare Data Recovery for Windows. Tani waxay khatar la'aan iyo qalab si sahlan loo isticmaalo caawisaa in aad ka bogsato files tirtiray ka Windows Vista si fudud, iyadoo aan loo eegayn sida ay u tirtiray. Dhawaan, waxaad si fudud u soo kaban karto dhammaan faylasha tirtiray ka your computer Windows Vista, sida music, document files, videos, sawirada, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah qalab ah si ay u bilaabaan Windows Vista tirtiray kabashada file hadda!
Kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows Vista ee 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab / drive meesha files ayaa tirtiray ka your computer Windows Vista.
Tallaabada 1 kabsado tirtiro xogta ka Windows Vista leh "lumay Recovery File" mode
Burcad barnaamijka on your computer Windows Vista oo aad arki doonaa suuqa kala ah sidan. Halkan qalab siin doonaa 3 hababka soo kabashada aad u: "lumay Recovery File", "Recovery File ceeriin ah" iyo "Recovery ah Barzakh,".
Si aad u soo kabsado files tirtiray ka computer Windows Vista, fadlan dooro "lumay Recovery File" mode inuu ku soo bilowdo.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab / drive meesha files ayaa tirtiray ka your computer Windows Vista
Waxaad dooran kartaa xijaab / drive ka taas oo aad rabto inuu ka soo kabsado files tirtiray oo guji "bilow" button in aynu barnaamijka faylasha scan ku yaal.
Tallaabada 3 Ladnaansho files tirtiray ka computer Windows Vista
Marka iskaanka ay ka badan tahay, dhammaan faylasha helay oo ku iskaan xijaab / drive lagu soo bandhigi doonaa "Jidka" iyo qaybaha "File Type". Waxaad ku eegaan karo images helay ama magacyada file view si aad u hubiso in files tirtiray la raadsan karaa your computer Windows Vista.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso files tirtiray oo guji "Ladnaansho" button furmo si ay u soo celin your computer badbaadiyo.
Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ku hayn faylasha kabsaday dib ugu xijaab / drive asalka.
5 Barnaamijyada The Top DVD Gubidda for Windows
Siyaabo Free inuu ku biirayo Data ka Windows Phone in macruufka Devices
Sida loo isticmaalo Windows Live Movie Kan sameeyey gaabis Motion Saamaynta